Magaalada burco ee maamulka soomaliland oo xaalad deg deg ah lagu soo rogay qof gali karaa iyo qof ka bixi karaahi majiro – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 1st June 2017 072
Kulan degdeg ah oo ay maanta yeesheen golaha deegaanka ee magaalada Burco ayey kaaga dhawaaqeen in magaalada Burco la geliyey xaalad deg deg ah.
Kulanka ayay ka soo saareen sagaal qodob oo ay ka mid yihiin in gebi ahaan la fasaxay dugsiyadii gaarka loo lahaa, islamarkaana la hakiyey imtixaanaadkii dugsiyada dawliga ah.
Duqa magaalada Burco Maxamed Yuusuf Muraad oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa sheegay inay dhigeen goobaha laga soo galo magaalada Burco shaqaale caafimaad, kuwaas oo daawaynta lama huraanka ah u fidinaya dadka ka baxaya magaalada ama kuwa soo gelaya.
Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in xaaladdan degdegga ah ay iska kaashanayaan wasaaradaha caafimaadka, waxbarashada iyo ciidamada kala duwan ee ku sugan gobolka, isaga oo sheegay in la samayn doono dardargelin nadaafadadeed iyo wacyigelin kala duwan.
Amarkan golaha deegaanka ee magaalada Burco ayaa ka dambeeyey markii uu si aad ah u faafay xanuunka shuban-biyoodka, oo toddobaadkii ugu dambeeyey ay u dhinteen in ka badan 20 qof, halka uu xanuunku uu soo ritay illaa 1000 qof oo kale.
Daawo: Maxaadan ogeyn oo maanta looga hadlay shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka?
DEG DEG: Jubbaland oo dagaal ku dishay afar dagaalame oo ka tirsan alshabaab islamarkaana la wareegtay deegaanka….
XOG: Madaxweyne farmaajo oo deg deg ugu ambabaxaya dalka imaaraadka carabta iyo sacuudiga oo garwadeyn ka….
SAWIRO: Xildhibaano DFS ka tirsan oo booqday askartii Kismaayo lagu dhaawacay, kadib markii….